Nsonaazụ Ọdịnaya na Formats Drive Results | Martech Zone
Ndị na-ege gị ntị dịgasị iche. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnwe ekele maka akwụkwọ ederede dị ogologo, atụmanya ọzọ nwere ike ịchọ ịtụle ndepụta atụmatụ tupu ha akpọtụrụ gị maka azụmaahịa. Nke a nnukwu infographic site na ContentPlus, Ọrụ ahịa ọdịnaya nke UK, na-enye nchịkọta nke ọtụtụ onyinye ọdịnaya dị adị, ihe kpatara ha ji arụ ọrụ, na ụfọdụ data na-akwado. Ha nwekwara soro blog post nke na-ejikọta ya niile.
Ndị na-eji Intanet eme ihe aghọwo ndị na-azụ ahịa ọdịnaya dị egwu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe ha na-ahọrọ na-aga n'ihu. Oge agafeela mgbe akara nwere ike igboju mkpa ndị na-ege ha ntị site na ibipụta ọkwá dị elu nke na-ezigara otu ozi dịka onye ọ bụla ọzọ na ụlọ ọrụ ha. Ndi otu ndi n’ebughari ahia nke oge a bu ndi na-eweputa ọdịnaya di egwu na usoro nke ndi mmadu choro, nke a bu isiokwu nke anyi ihe omuma ihe omuma ohuru ohuru choro 'n' Mix.
Tags: blogblog postsikpe ọmụmụozi facebookatụmatụmbido peeji nkeInfographics AhịaNewsakwụkwọ akụkọtweetvideoswebsitewhitepapers
Jul 22, 2013 na 2: 42 AM
Ihe omuma nke oma, ihe osise di nma, na ezi ọdịnaya, mana otutu ihe uto nwere ike mebie ezé gi, yabụ aro m bu ịmalite di na nwunye, ma soro ya rue oganihu tupu ị gbalịa ụdị ụtọ na ụdị niile.
Jul 22, 2013 na 11: 37 AM
N'ezie! Ma ọ bụ chekwaa ụfọdụ aka ekpe ma jiri oge niile. Anyị na-ahụ n'anya site na iji nyocha miri emi nke ukwuu ma nwee nnukwu ọdịnaya n'ofe usoro… enwere ike ịgbatị post blog n'ime akwụkwọ akụkọ ọcha, akwụkwọ ọcha n'ime ngosi, ma tinye eziokwu ahụ na nnukwu akwụkwọ ozi.